ट्रमाको टिकटले वीरमा उपचार - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
ट्रमाको टिकटले वीरमा उपचार
अन्जना पौडेल काठमाडौँ चैत २७
कंलकीकी ७५ वर्षीया पद्मकुमारी पोखरेल वीर अस्पतालको टिकट काउन्टरमा अलमल्ल परेर बसिरहेकी थिइन्। छाती दुख्ने, पेट पोल्ने, ढाड दुख्ने, स्वासप्रस्वास बढ्ने समस्या लिएर अस्पताल आएकी उनी टिकट काउन्टरमा आफ्नो पालो कुरेर बसिरहेकी थिइन्।
एक्लै जाँच गराउन आएकी पोखरेल आफ्नो पालो नआएकोमा दिक्क थिइन्। ‘बिहानै आएको, टिकट लिएर बसेको, ख्वै यति बेला सम्म बोलाउदैनन्, कति बेला आउने हो पालो?’ दिक्क मान्दै पोखरेलले भनिन्, ‘सँगै बसेकी एउटी बहिनीले आमा यँहा पालो कुर्ने होईन, बाहिर डाक्टरहरूले बेञ्च राखेर चेक गरिरा’छन्, त्यहीँ जानुस् भनेपछि बल्ल यहाँ आएर जँचाउन पाएँ।’
सुरुमा खुट्टा झमझम गर्ने त्यसपछि बिस्तारै लत्रिँदै जाने र खुट्टा नै नचल्ने समस्या देखिन थालेपछि छोरीसँगै अस्पताल आएकी मकवानपुर, पालुङकी ६९ वर्षीया भक्तमाया कुँवर चिकित्सहरूको आन्दोलनको बारेमा अनभिज्ञ थिइन्। ट्रमा सेन्टरमा पुगेर टिकट लिएपछि जाँच गराउन डाक्टर कुरेर धेरै बेर बसिन्। डाक्टर नै नआएपछि उनकी छोरीले अस्पतालकै एक कर्मचारीसँग सोध्दा वीरमा उपचार भइरहेको जवाफ पाएपछि वीरमा आएका उनीहरू डाक्टर कुरेर बसिरहे। ‘टिकट काटेको धेरै समयपछि यता होइन् वीरमा जानुस् भनेर पठाए। अब यता कुन बेला आउने हो पालो’, कुँवरकी छोरीले उदास हुँदै नेपालखबरसँग भनिन्।
गोकर्णेश्वरदेखि किरा लागेको दाँत फुकाल्न आएका ७५ वर्षीय शम्भुप्रसाद आचार्य कता जाँच गराउने हो भनि कोठा कोठा चाहार्दै थिए। आफैँ पत्ता नलागेपछि अस्पतालमा सफा गर्दै गरेकी महिला कर्मचारीलाई सोधे। ती महिलाले ओपीडी सबै ६ दिन देखि बन्द छ भनेपछि चिन्तित देखिएका आचार्य दिक्क मान्दै यताउता डुल्न थाले। ‘किराले खाएको दाँतको दुखाईले हैरान भएर दाँत नै निकालम् भनेर आएको, बन्द रहेछ’, गुनासो गर्दै उनले भने, ‘आन्दोलन छ भन्ने त समाचारमा सुनेको थिए। दाँत फुकाल्न आन्दोलनले नरोक्ला भनि आएको, दुःख पाए।’ उनले आउँदा र जाँदा सिंगो दिन खेर गएकोमा दुखेसो पोखे।
‘स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा सरकार अनि चिकित्सक दुवैले यसरी खेलबाड गर्न मिल्छ। सारा जनतालाई दुःख दिएर के गर्न खोज्या? नजिकै भएकालाई त खासै समस्या नहोला। टाढाबाट आउने को बिजोक भएन र?’ आमाको दाँत जाँच गराउन वनस्थलीबाट आएका ६९ वर्षीय पाल्साङ तामाङले आक्रोस व्यक्त गरे। टाढाका जनता कहिले अस्पताल खुल्ला र जाँच गराउन पाइएला भन्दै होटलतिर बसिरहेका बताउने उनले डाक्टर र सरकारले नै नेपालको बेइज्जत गरेको तर्क व्यक्त गरे। ‘यस्तो त कुनै देशमा पनि हुँदैन। नेपालमा मात्र हुन्छ सबैथोक’, तामाङ्ले बताए।
गत शुक्रबारदेखि समायोजन ऐन अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। चिकित्सकको आन्दोलनका कारण उपचारसेवा प्रभावित भएपछि देशभर लाखौँ बिरामी अलपत्र परेका छन्।
आन्दोलनको छैठौँ दिनमा टाढाबाट आएका बिरामीलाई दुःख नहोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण अस्पतालमा डाक्टरहरुले प्राथमिक उपचार शैलीमा अस्पताल बाहिरै उपचार सेवा सुरू गरेका छन्। उपचार सेवा सुरु हुन सुखद् भए पनि यसले बिरामीमा थप अन्यौलता पैदा गरेको छ। धेरैजसो बिरामी कहाँ उपचार भइरहेको छ भन्ने समेत थाहा नपाउँदा यो सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन्।
‘टाढाबाट आउनु भएका बिरामीहरूलाई दुःख नहोस् र प्राथमिक उपचार र औषधि सेवनपछि दुखाईमा राहत पुग्ने उद्देश्यका साथ अस्पताल प्राङ्गणमा निःशुल्क उपचार सुरू गरेका हौँ’, उपचारमा संलग्न पेट रोग विशेषज्ञ डा. जीवन थापाले भने।
यता सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे भने बिरामीले धेरै दुःख नपाउन भनेर प्राथमिक उपचार सेवा सुरु गरेको बताउँछन्। ‘बिरामीको ज्यान नजाओस् भन्नका लागि पहिल्यैदेखि आकस्मिक सेवा खुल्लै राखेका थियौँ’, डा पाण्डेले भने, ‘बिरामीले थप दुःख नपाउन भनेर प्राथमिक उपचार सेवा सुरु गरेका हौँ।’ उनले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
उपचार सुरू भएको थाहा पाएपछि बिरामीहरु टिकट काउन्टर, ओपीडी र अस्पताल प्राङ्गणमै पालो कुरिरहेका थिए। अस्पताल प्राङ्गणमा अव्यवस्थित तरिकाले, बिना कुनै सूचना सुरू गरिएको उक्त निःशुल्क प्राथमिक सेवाले दुःख पाएका बिरामीलाई झन् दुःख भैरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो।
उपचारका लागि वीर अस्पताल आएका अधिकाशं बृद्धबृद्धा आन्दोलनबारे अनभिज्ञ थिए। डाक्टरहरूले बिरामीको उपचार सुरु गरेको थाहा पाए पनि कहाँ र कसरी भन्ने जानकारीको अभावमा एक्लै आएका जेष्ठ नागरिक झनै अलमलमा परेका थिए।
विगत एक महिनादेखि ढाड दुख्ने समस्या सुरू भएपछि वीर आएका सिन्धुपाल्चोकका ७५ वर्षीय शम्भुप्रसाद आचार्यको ढाडको हड्डी खिएको हुनाले एक्स रे र सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने भयो। प्राथमिक उपचार मात्र दिइरहेका डाक्टरले औषधि खाँदै गर्नुस र आन्दोलन बन्द भएपछि फेरि आउनुस् है भन्दा हवस् भन्दै बिदा भएका आचार्य चिन्तित थिए।
‘सिन्दुपाल्चोकदेखि आएको, अब कहिले आन्दोलन बन्द हुने हो, कसरी थाहा हुन्छ र हामीलाई? जनतालाई कति दुःख दिन जानेका’, दिक्क मान्दै उनले भने।
टाढाबाट आएका बिरामीलाई सेवा दिन आन्दोलनाको सुनुवाई नभएसम्म यो सेवा सुचारू रहने भनि डाक्टरहरूले बताइरहँदा अधिकांश बिरामीले पाउनु पर्नेभन्दा बढी दुःख पाइरहेका थिए। यो दुःखको अन्त्य कहिले भन्ने जवाफ न त डाक्टर न त बिरामीसँग नै छ।
प्रकाशित २७ चैत २०७५, बुधबार | 2019-04-10 18:06:41
अन्जना पौडेल नेपालखबरकी संवाददाता हुन्
अन्जना पौडेलबाट थप
चिकित्सक आन्दोलनः वीर पुगेका बिरामी कोही खुसी, कोही आक्रोशित (भिडियो)
प्रहरीले वीरको टिकट काउन्टर खुलायो, बाहिर बेञ्च राखी डाक्टर उपचारमा
कालो चश्मामा चिटिक्क महर्जन!
यस्ता महिलालाई हुन्छ बढी पाठेघरको क्यान्सर, कसरी बच्ने?
वीरकाे ४० करोडको टोमोथेरापी मेसिन सशस्त्र अस्पतालमा अलपत्र
जिमः बुझेर गरौँ, स्वस्थ बनौँ
‘स्तनपानले महिलाको सौन्दर्य बिगार्दैन, बढाउँछ’
ज्यान घटाउन जुम्बा